Muxuu Tuchel U Beddelay Hudson-Odoi 30 Daqiiqo Markii Uu Keenay Kaddib? Isaga Ayaa Ka Jawaabaya – Garsoore Sports
Muxuu Tuchel U…
Muxuu Tuchel U Beddelay Hudson-Odoi 30 Daqiiqo Markii Uu Keenay Kaddib? Isaga Ayaa Ka Jawaabaya
Thomas Tuchel oo xanaaqsan ayaa qarin kari waayey shucuurtiisa waxaana uu uu eedeyn u jeediyay weeraryahan Tammy Abraham iyo Callum Hudson-Odoi kaddib markii uu labadoodaba ka saaray kulankii ay Chelsea barbaraha 1-1 la gashay Southampton.
Mason Mount ayaa kansalay goolkii Takumi Minamino ee kooxda Saints isagoo si fiican u qaatay rigoore daqiiqadii 54aad ee cayaarta si uu u xaqiijiyo in rikoorka guuldarro la’aanta Tababare Tuchel uu wali ahaado mid aan la jebinin laakiin tababarahan Jarmalka u dhashay ayaa wuxuu wajahay jahawareer intii uu kuu sugnaa khadka taabashada kulankii Maanta ka dhacay garoonka kooxda St Mary’s.
Blues ayaa si aad ah u dooneysay inay xoogaa cadaadis ah saarto Manchester United iyo Leicester iyadoo ku raja-weyneyd inay 3da dhibcood urursato kulankan balse tababare Tuchel ma uusan la dhicin bandhigga kooxdiisa wuxuuna qirtay inay dareemeen inay ‘fursad Lumiyeen’.
Hudson-Odoi ayaa lagu beddelay cayaaryahan Tammy Abraham waqtigii nasashada kaddib, wuxuuna garoonka ku qaatay keliya 30 daqiiqo kahor inta aan isna lagu beddelin Hakim Ziyech.
Da ‘yarka reer England ayaa muujiyay niyad-jab markii uu ku soo laabtay kursiga keydka.
Markii la weydiiyay inuu ka walwalsan yahay taam ahaanshaha Abraham kahor kulanka Chelsea ee wareega 16ka Champions League oo ay la leeyihiin Atletico Madrid, Tuchel ayaa u sheegay BT Sport: ‘Kama walwalsani Tammy, beddelkiisu wuxuu ahaa dhaawac. ‘Way ku adkaatay inuu muujiyo tayadiisa mana aanan ku faraxsanayn 20-kii mitir ee ugu dambeeyay. ‘Tammy ma uusan ka beddeli karin waxba cayaarta siddaas darteed wax yar ayaan bedelnay shaxda, waxaan keennay Hudson.’
Tuchel oo warka sii wata ayaa ka hadlay qiimeyntiisa bandhigii Hudson-Odoi wuxuuna ku dhaleeceeyay weeraryahanka in uusan laheyn tamar intii yareyd uu cayaarta ku jiray. ‘intii uu cayaarayay, kuma aanan faraxsanayn tamarta iyo dabeecadda iyo raacashadiisa sidaa darteed waxaan go’aansanay inaan mar kale beddelno sababtoo ah wax badan ayaan dalbanaynay,’
Tuchel ayaa sii waday. “Waxaan dalbaneynay boqolkiiba boqol, waxaan dareemay dareen ah inuusan nagu caawin karin qaabkan.’ ‘Marka go’aanka maanta waa go’aan addag, in ciyaartoydu yimaadaan oo ay soo baxaan hadana, laakiin berri waa la iloobi doonaa waxwalba,wuxuuna leeyahay fursad uu ku bilaaban karo kulanka Atletico.’
Chelsea Oo Dhibbic Niyad-Jab Leh Kasoo Qaadatay Kooxda Southampton
Everton Oo Guul Naadir Ah Ku Gaartay Anfield Iyo Dhibaatada Liverpool Oo Wejiyo Badatay